Faka amafayela we-ISO kusuka kuDolphin | Kusuka kuLinux
Imenyu Yesevisi ye-Mount Mount elulaLeli igama lesikripthi esilula esingangeza kumphathi wethu wefayela KDE (IDolphin) ukukhweza nokwehlisa amafayela we-ISO ukuchofoza okungu-2 kuphela.
Nazi ezinye izithombe ukuze ubone ukuthi kulula kangakanani:
Uma sesichofoza ku- «Khweza iso«, Sizosibuza ukuthi iyiphi ifolda esifuna ukuyifaka ISO. Endabeni yami ngithi kuwe khweza kuyo / abezindaba / iso:
Futhi izosicela iphasiwedi yethu yokuphatha:
Silungile, lokhu kwanele ukufaka ifayili le-ISO 🙂
Manje… Ngikufaka kanjani lokhu ku-KDE yami?
2. Bazobona kufolda yabo (ekhaya) ifayela .ideskithophu (148881-mountIso.desktop), kufanele bayibekele ifolda yeDolphin.
Ngisebenzisa I-ArchLinux con KDE 4.8, ukuze ngibeke lelo fayela kuleyo folda engilibeke esigungwini:
Kungashintsha kancane ngokuya nge-distro abayisebenzisayo, kepha ngeke kushintshe okuningi. Uma bengabaza bangitshela ukuthi basebenzisa yiphi i-distro futhi ngiyabasiza ukuthola ifolda efanele
Sibonga u i-virgolus ngokwenza lokhu futhi ukuhlanganyela nawo wonke umuntu ngokusebenzisa I-KDE-Bheka.^ - ^
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Faka amafayela we-ISO kusuka kuDolphin
Kufanele kube lula ukwengeza isenzo sangokwezifiso kuhlengethwa, esicishe sifane ne-qtfm.
Ngizobona uma ngenza isifaki 😀
Kulula kabi ukukwenza hehe.
Bengingumsebenzisi weWindows impilo yami yonke, manje ngishiyile umnikazi futhi ngino-OPENSUSE KDE, bengineminyaka engu-6 ngiseLinux kungibize kakhulu ukuthola i-distro yami ngaze ngathola i-geeko, inketho yami yesibili ku I-Linux iyi-pear os, yize ngithathe isikhathi esiningi ku-linux angikaze ngiyisebenzise isikhathi esigcwele, angizange ngirekhode nge-k3b ngicabanga ukuthi lapho ukufaka i-iso idrayivu ebonakalayo idalwa nge-iso kanye namathuluzi we-daemon futhi ingarekhoda kusuka kokugibele shayela ku-DVD….
kukhona uNautilius ???
Akukho mqondo 🙁… kufanele kube khona, nakanjani kukhona, kepha angikaze ngiyisebenzise iGnome isikhathi eside. Futhi, kunokubi ukuthi manje ngeGnome3 angazi noma imibhalo yeGnome2 izosebenza yini ...
Ukusuka ekujuleni kokungazi, yini ukusetshenziswa kokufaka amafayela we -iso ngale ndlela?
Kusukela ku-intanethi ngibone izindlela zokukwenza naku-gnome, kepha akukho ncazelo yokuthi yenzelwe ini.
Endabeni yami ngiyisebenzisa lapho ngilanda isithombe se-iso le-dvd (i-movie), ngiyibeka ngale ndlela ukubheka ngaphambi kokurekhoda ukuthi ngabe yini engiyidingayo i-xD
Ukubona ukuthi ziyasebenza yini ungalayisha i-ISO ngqo kwiVLC.
Bengingakwazi lokho, ngiyabonga ngethiphu.
Kungenxa yokunambitheka komuntu siqu, angiyithandi i-VLC 🙂
Into yokunambitha, noma kunjalo, iyisidlali sevidiyo esihle kakhulu laphaya namhlanje.
Yebo kunjalo, ngiyazi ukuthi unezinketho eziningi kunezinye, ngeke ngiphikisane uma kungcono noma kubi kakhulu, kepha angazi ... kungukuthanda kwami ​​uqobo, ngithanda iSMPlayer 😉
Amafayela e-ISO, noma abizwa nangokuthi izithombe, ngamafayela aqukethe yonke imininingwane eku-CD, DVD, Blu-Ray, njll. Ngamanye amagama, kufana nokuba nenye yamafomethi angenhla ku-hard drive yakho. Kukhona izithombe zezinhlobo eziningi njengemidlalo, ama-movie, izinhlelo ezikhona. Ngaphezu kwalokho, ifomethi ye-ISO akuyona yodwa, kunezinye izinhlobo eziningi ngaphandle kwe-ISO njenge-MDX, ​​MDS, MDF, B5T, B6T, BWT, CCD, CDI, BIN, CUE, APE, NRG, PDI, ISZ, njll. Zonke zisebenza umsebenzi ofanayo futhi ifomethi ngayinye ngeyezinhlelo ezahlukahlukene zokucabanga.
Kungani kufanele ufake isithombe?
Inhloso yokufaka isithombe ukuthola isimilo esifana nokufaka i-disc (CD / DVD / Blu-Ray) enolwazi olufanayo futhi hhayi ukuthi kufanele usishise noma usishise ukuze usisebenzise.
Yini inzuzo yokuba nezithombe ezilondolozwe ku-HDD yami?
Ukuba amakhophi ngqo ama-CD / DVD / Blu-Ray kufana nokuba nekhophi engasoze yehluleka ngenxa yemikrwelo.
Akukhathalekile ukuthi ama-disc akho alahlekile yini ngoba unekhophi kwi-HDD yakho (Kuyinto eyenzeka kimi kaningi kakhulu).
Ungasebenzisa izithombe ze-ISO ukubona kahle futhi unganciki kwi-CD / DVD / Blu-Ray (Yilokho engihlala ngikwenza).
Isibonelo, uma kuyi-ISO yeDVD ye-movie, ukufaka i-ISO singabona iDVD ngemenyu nakho konke ongakhetha kukho 🙂
Ngokuyinhloko ngoba kuyindlela elula yokubona amafayela aqukethwe esithombeni se-ISO nokuxhumana nawo njengokungathi asenkombeni.
Ngikunikeza isibonelo esijwayelekile: ku-Windows abantu abaningi basebenzisa izinhlelo ze-UltraISO, Daemon Tools, njll. ukufaka izithombe (dala amayunithi abonakalayo).
Ngiyabonga kakhulu ngomngani wokufaka isandla, le ndlela naye ubengayazi: S
Kuhle kusebenza kahle, izinkomba zisebenza eKubuntu futhi bengingazi ukuthi i-VLC idlale i- * .iso 😀
Umsebenzi onentshisekelo, kepha awudingi ukuthinta ikhonsoli. Ukufaka, kusuka kuDolphin uvula okuncamelayo bese kuthi esigabeni Sezinsizakalo kulandwe.
Ngihlala ngikhohlwa ukuthi ikhona, ngoba angikaze ngiyisebenzise 🙂
Ngisho nangaphandle kokusebenzisa i-terminal kwakulula njengokuvula isixhumanisi, ukulondoloza ifayela bese ulihambisa kwifolda, noma kungekho okuningi okumele ukwenze ku-terminal 😀
UMikaela Baez kusho
Ku-Chakra, inketho efanayo kepha elula iza ngokuzenzakalela 😀
Phendula uMikaela Baez
Angizamile empeleni Chakra, angikayiboni le nketho. Le "addon" yeDolphin ayizange ihlale isikhathi eside kimi, ngiyisuse ezinsukwini ezimbili ngemuva kokuyifaka ku-LOL !!!
Ukubingelela futhi wamukelekile kusayithi 🙂
Ku-LinuxMint 13 KDE 64 kufanele ushintshe umugqa womyalo bese ususa u-4 wokuqala ovelayo; kungabonakala kanjena:
Ngaleyo ndlela kuyangisebenzela.
Kuhamba kahle ekuvulekeni, ngiyabonga ngethiphu.
Akungisebenzeli 🙁 Sengivele ngiyifakile kusuka ku-terminal naku-services futhi ayisebenzi kimi ngiyishukumisile njengoba umlingani uGhermain esho njengoba ngisebenzisa i-linuxmint 13 kde futhi akukho okungangivumeli ngikhwele i-isos, ngenzani akulungile?
Yiliphi iphutha elikunikeza lona ngqo?
Ingabe iyakubonisa ibhokisi lokukhetha i-ISO okungenani?
ayingibonisi lutho ngokusobala iyayifaka kepha kufana nokuthi akwenzekanga lutho
Ake sizame ukusebenzisa inguqulo yakamuva yalokhu, ngoba engikubeke lapha akuyona okwakamuva njengamanje: http://kde-look.org/CONTENT/content-files/148881-mountIso.desktop
Ulwazi oluhle kakhulu. Kungisebenzele ngaphandle kwenkinga 😀
Lokho engangikudinga nje!
Ngiyaxolisa ukuthi iDolphin ayinayo inketho yokuhlela imenyu yokuqukethwe 🙁 E-Thunar ngingaqala "izenzo ezingokwezifiso".
Okuncamelayo -> lungiselela ihlengethwa -> Izinsizakalo.
Ihlaya: Isizathu # Sabahleli Bokuba Livila